खेलीरहेका छोरालाई एक्कासी देखा परेको गोहीले बाबुकै अगाडी नि ल्यो – Gazabkonews
खेलीरहेका छोरालाई एक्कासी देखा परेको गोहीले बाबुकै अगाडी नि ल्यो
काठमाडौं। ८ वर्षका एक बालकलाई गोहीले निलेपछि उक्त गोहीको पे ट चि रे र बालकको शरीर बाहिर निकालिएको छ । इण्डोनेसियामा भएको यो घटनामा बालकलाई निल्ने गोहीलाई समातेर उसको पेट चि रे र बालकको श व लाई बाहिर निकालिएको हो । द सनको रिपोर्टअनुसार मृत बालकको नाम दिमस मुल्कान सपुत्रा हो । दिमस पितासँग माछा मार्न गएका थिए । यही क्रममा यो घ .ट .ना भएको हो । अचानक गोही पानीबाट बाहिर आयो र बच्चालाई तानेर पानीभित्र लिएर गयो । इण्डोनेसियाको बैंगेलोन जिल्लामा बुधबार बिहान यो घ ट .ना भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ ।
आफ्नो छोरालाई गो.हीले ता.नेर लिएर गएको देखेपछि दिमसका पिता सुबलिआंस्याहले छो.रा.लाई ब.चाउ.ने प्र.यास गरेका थिए । उनले गोहीको पिछा गरेका थिए । पौडिँदै गोहीको नजिकै गएर उनले गोहीलाई मु.क्का ले हा ने र छोरालाई बचाउने प्रयास गरेका थिए तर उनी अ स फ ल भए । घ ट .नाको भोलिपल्ट गोहीलाई समातिएको थियो । गोहीलाई समातेपछि उसको पेट चिरेर बच्चाको श.व बा.हिर नि.का.लि.एको थियो । यसको केही हप्ता पहिले पनि इण्डोनेसियामा एक बालकलाई गोहीले मा. रे. को थियो जसको श व अहिलेसम्म बरामद हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक पार्कमा थुप्रै मानिसले हेरिररहेका थिए, यो जोडी यौ नमा लिप्त थिए , वे श्या लयमा जसरी गरे गर्नै नहुने काम : एक नि र्ल ज्ज जोडीले सार्वजनिक पार्कमा थुप्रै मानिसहरु र कैयौं परिवारकै अगाडि खुल्लमखुल्ला यौ। नस।म्बन्ध रा खिरहेको देखिएपछि त्यहाँका सर्वसाधारण आ ।क्रो।शि त भएका छन् । ती नि र्ल ज्ज जोडीलाई थाइल्याण्डको बैंककस्थित एक सार्वजनिक पार्कमा यौ .न म्बन धमा लि ।प्त भएको बेला एक महिलाले भिडियोमा उतारेकी थिइन् । उनले पु लिसले यसको अनुसन्धान गरोस् भनेर भिडियो उ तारेकी थिइन् । द सनको रिपोर्टअनुसार उनले रेकर्ड गरेको भिडियो फुटेजमा बालबालिकाहरु नजिकै खेलिरहेको समेत बेवास्ता गरी ती दुईले चार मिनेटभन्दा बढी समयसम्म कसरी सार्वजनिक यौ.न स.म्ब.न्ध जारी राखे भन्ने देखिएको छ ।
यो देखेर आश्चर्यचकित भएकी महिला रतानाले उनीहरूले शहरको चाटुचक वीकेन्ड मार्केट नजिकै भाचिरबन्जातास पार्क हुँदै हिँड्ने मानिसहरूको कुनै वास्ता नगरेको बताइन् । उनले ‘अधिकारीहरूले जाँचबुझ गर्न सकून्’ भनेर त्यो अभद्र कार्यलाई भिडियोमा रेकर्ड गर्न चाहेको बताइन्। रतानाले भनिन् ‘रेकर्डिङ सुरु गर्नुभन्दा पहिले को अवस्था झनै नराम्रो थियो। तिनीहरूले आफूहरु सार्वजनिक ठाउँमा भएको कुरा बिर्सेका थिए । यी मानिसहरूका लागि आधारभूत शिष्टताको कुनै अर्थ थिएन । हामी वरपर केटाकेटीहरू थिए र परिवारहरू पार्कभरि हिँडिरहेका थिए।’
ती दर्शकले त्यो ठाउँ खेल मैदान नजिकै भएको कुरा बताइन् जहाँ थुप्रै केटाकेटीहरू खेलिरहेका थिए तर त्यो नि र्ल ज्ज जोडी अझै पनि यौ ।नमा लि ।प्त थिए । ‘मानिसहरू आफू पछाडिको बारको ठीक छेउमा हिंड्न थालेपछि पनि ती जोडीले रोक्न चाहेनन्’ र तनाले थपिन् । फेब्रुअरी १३ मा खिचिएको उक्त भिडियोमा रहेका जोडीको अहिलेसम्म पहिचान हुन सकेको छैन । तर त्यसपछि उनीहरुमाथि कारवाही गर्न प्र हरीसँग माग भइरहेको छ । थाइल्यान्डमा सार्वजनिक मर्यादा उल्लंघनमा बढीमा ५ हजार भाट ९१९ हजार ३ सय रुपैयाँ० जरिवाना हुन सक्छ ।